ဖုန်းဘီလ်အားဖြင့်ကစားတဲ့ Deposit | အခမဲ့ထိပ်တန်း Up ကို SMS ကိုပိုဆုကြေးငွေ! |
နေအိမ် » ဖုန်းဘီလ်အားဖြင့်ကစားတဲ့ Deposit | အခမဲ့ထိပ်တန်း Up ကို SMS ကိုပိုဆုကြေးငွေ!
အတွင်းရေးသတင်းများကိုအပေါ် ဖုန်းဘီလ်နှင့်အတူကစားတဲ့ထိပ်တန်းကိုတက် အခမဲ့အပိုဆုကြေးငွေ
အတူအသင်းအတွက်စာမျက်နှာ Coinfalls.com အပိုဆု – ပြင်းထန်သောကစားသမားများအတွက်…
ရယူ £5ကစားတဲ့အဘို့အ slot နှင့်£ 500 အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေအပိုဆုအပေါ်အခမဲ့ on the အားလုံး slot နှင့် အခမဲ့လှည့်ဖျား ဆိုက်ကို – Coinfalls ကာစီနိုမှာကာစီနိုဂိမ်းများ – အွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်း – အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေ!
မိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ကျော်ကြားမှုကိုဗြိတိန်အနှံ့ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်အဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားသူတွေဟာ – ထိုသိရှိပြီးသားမဟုတ်သော- will love being able to take full advantage of new Slots, ကဒ်ဂိမ်းများ, နှင့် ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့သိုက် ဒီ site ပေါ်တွင် featured ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ. မသာဒီကစားသမားလောင်းကစားရုံသိုက်လုပ်နဲ့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းကစားရန်သူတို့ရဲ့ဖုန်းကရက်ဒစ်၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်ခွင့်ပြုထားခြင်း, ဒါပေမယ့်မိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံငွေပေးချေမှုလည်းတကယ်အနိမ့်များမှာ (ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းသုံးပြီးသိုက်မှ£ 3- £5နိမ့်ဆုံး, ခရက်ဒစ် / ငွေကြိုဝယ်ကဒ်သို့မဟုတ် PayPal ကငွေပေးချေမှုများအတွက်£ 10 £ 20 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်), ထိုသို့ပြုမှစစ်မှန်သောငွေရှာတစ်ဦးဖုန်းဖြင့်မည်သူမဆိုဝင်ရောက်အနိုင်ရ – ရုံစူပါအခွင့်ထူးခံမဟုတ်.
MobileCasinoFreeBonus ကစားသမားချင်သောသူအပေါငျးတို့သဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်. အမှန်တကယ် enthused ဖြစ်ပါသည် ဖုန်းကိုအကြွေးနှင့်အတူကစားတဲ့ကစား ရှိ. ဒီစာမျက်နှာပေါ်က်ဘ်ဆိုက်များအင်္ဂါရပ်များအားလုံးကစားသမားဖြစ်စေတစ်ဦးပေး သရုပ်ပြပွဲကစားအခမဲ့ခံစား, ကစားသမားအဖြစ်မကြာမီသူတို့ sign up ကိုအဖြစ်ခံယူသောသို့မဟုတ်လုံးဝမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ.
စစ်မှန်သောပိုက်ဆံအဘို့ကစားရန်အပေါ် Going ရုံတခုအတှေ့အကွုံဆုချီးကဲ့သို့ဖြစ်၏, ကဆုကြေးငွေများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းမှကြွလာသောအခါ, ဤမိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံစာသားသည်အခြား outdo မှနောက်ပြန်ကျော်ကွေးအဖြစ်! ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သိုက်ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေဖြစ်စေတစ်ဦးကိုဆက်ကပ် 400% ငွေသားပွဲစဉ်တစ်ချိန်ကချွတ်နှင့်ဝသကဲ့သို့ အိတ်ကပ် Fruity; သို့မဟုတ်တစ်ကစားသမားကျော်ပထမဦးဆုံး3တက်ရကျိုးနပ်ဆက်တိုက်သိုက် £ 225 မှာ မိုဘိုင်းဂိမ်းများ. ဘယ်နှစ်ယောက်အခြားလောင်းကစားအဆစ်အမှန်တကယ်စစ်မှန်သောပိုက်ဆံသိုက်အောင်များအတွက်ကစားသမားဆုချ – ပင်လောင်းနှုန်း 10p ထံမှဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့သိုက်များအတွက်?
ဒီလရဲ့ Featured ဆိုက်ကို: TopSlotSite.com
ပြင်းထန်သော Credit / Debit Card ကိုများအတွက်ထိပ်တန်း Notch ဖုန်းကာစီနို, နှင့် eWallet စာရင်း: £ 200 အပ်နှံပွဲစဉ်အပိုဆု; Daily သတင်းစာပရိုမိုးရှင်း; နှင့်အကြီးအကျယ်တိုက်ရိုက်ထီပေါက်နိုင်ပွဲများ!!
PocketWin ရဲ့ အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေမိုဘိုင်း ဇါတ်ရုံ
အဘယ်သူမျှမသိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့် ပတ်သက်. အကြီးအရာတစုံတခုသူတို့သေတ္တာပေါ်မှာဆိုရအတိအကျဘယျသို့ပွုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ…ကစားသမားတွေငွေသွင်းရန်မလိုဘဲဂိမ်းထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ Allow. PocketWin ထိုကဲ့သို့သောလောင်းကစားဝိုင်းကလပ်တခါဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအခမဲ့အဘို့မိမိတို့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်ကစားသမားဖိတ်ခေါ်သဖြင့်တဦးတည်းခြေလှမ်းထပ်မံကကြာ. ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်း features တွေကိုအားဖြင့်ကစားတဲ့သိုက်ပတ်ပတ်လည်သင်၏ဦးခေါင်းခြုံဖို့ကြိုးစားမီဒါ, သင်ရုံရိုးရှင်းတဲ့ SMS ပေးပို့ခြင်းများအတွက်အခမဲ့ဂိမ်းအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လုံးဝ£5ကြိုဆိုဆုကြေးငွေနှစ်ဦးစလုံးရလိမ့်မယ်.
slot ကစားရန်အပေါ် Going, Poker, သို့မဟုတ် Blackjack လည်းသင့်ရဲ့အနေဖြင့်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိရလိမ့်မည်, ကိုယ့်အားလုံးအကြီးအသိုက်သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ဆုကြေးငွေများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဘို့သင့်ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်လိမ့်မယ်:
£ 100 အထိအပ်ငွေပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေ
ရည်ညွှန်းကိုးကား-a-မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပိုဆု: £5တိုင်းသူငယ်ချင်းအတွက်အခမဲ့အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ရည်ညွှန်း 50% သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသိုက်၏
slots, ကဒ်ဂိမ်းများနှင့်ကစားတဲ့ ရုံ£3မှဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်သိုက် အနည်းဆုံး
အဆိုပါကောင်းတဲ့အရာသငျသညျမိုဘိုင်းအကြွေးကစားတဲ့နှင့်အတူဆော့ကစားသောအခါအကြောင်း, သငျသညျ Pocket ဝင်းကမိုဘိုင်းကာစီနိုကပေးအပ်အဆင်ပြေ၏အပြည့်အဝအားသာချက်ယူနိုင်ပါသည်, လုံးဝမိုဘိုင်းငွေတောင်းခံ၏ ins နှင့်တနေရာထွက်နေသေးတယ်သည့်. မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်ဂန္လောင်းကစားရုံစားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းကစားခြင်းအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေသောသူတို့ကိုတကယ်ကဒီမြတ်သောမိုဘိုင်းလောင်းကစားလောင်းကစားရုံထွက်စစျဆေးဖို့လိုပေမည်. Windows အတွက်ထောက်ခံမှုပေးသည့်ဗြိတိန်၌အဘယ်သူမျှမကအခြားမိုဘိုင်းလောင်းကစားလောင်းကစားရုံလည်းမရှိသောကြောင့်, အန်းဒရွိုက်, iOS and Blackberry phones while at the same time also allowing gamblers to take full advantage of being able to play with mobile credit Roulette.
Elite မိုဘိုင်းကာစီနို အွန်လိုင်းအပိုဆု
သီးသန့်နှင့်ရာတှငျအထကျတနျးလှာအကြားတစ်ဦးကွာခြားချက်ရှိပါတယ်: ထုတ်ကုန် / ဝန်ဆောင်မှုတခြားသူတွေနဲ့ခှဲဝေသို့မဟုတ် shared မဟုတ်ကြောင်းယခင်နည်းလမ်းများ; အဆုံးစွန်သောတစ်ဦးထက်သာလွန်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းအတော်ပင်ကအုပ်စုတစုကိုရည်ညွှန်းနိုင်သော်လည်း. အတိအကျဘာဘယ်သည် Elite ကာစီနို ဖြစ်. ဒါကြောင့်သူတို့ကဆက်ဆက်တစ်ဦးထက်သာလွန်ဂိမ်းအတှေ့အကွုံကိုပူဇော်ပေမဲ့, သူတို့လည်းသင်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆုကြေးငွေများနှင့်သိုက်ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သည့်လူတိုင်းပါဝင်ကြီးစွာသောအရှည်ကိုသွား, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကောင်းမွန်စွာဒီနေရာမှာဂိမ်းလက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်.
ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းနိူးခြင်းဖြင့်ကစားတဲ့သိုက်ကြွယ်ဝစွာသူတို့ရဲ့ကစားတဲ့ဂိမ်းကစားပျော်မွေ့ဘို့ Elite ရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်: £5မှာနိမ့်ဆုံးကစားတဲ့ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအကြွေးနှင့်အတူပေးဆောင်, အဆင့်မြင့် feature များနှင့်အတူ HD မှာကစားတဲ့ကစားရန်ရတဲ့ကကောင်းစွာရကျိုးနပ်သည်:
တိုးမြှင်သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့် HD ကိုအရည်အသွေးထိပ်တန်းအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများပယ် buzzing Get
သင့်ရဲ့ chip ကိုအရောင်ကိုရွေးချယ်ပါ, ဆွဲ '' ဎ’ ကစားသောအခါနေရာချထား drop
ဒီမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံလန်ဒန်မြို့တွင်အခြေစိုက်သည် – သဘာဝကျကျ Dahling! – ရလွယ်ပြီးခေတ်ဆန်သောသူတို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အကျိုးကိုခံရချင်သောသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါသည်. ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့သိုက်ထဲကအများဆုံး Get နှင့်သင်မှတက်ခံယူနိုင် သိုက်ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေအတွက်£ 800 အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်မှာအားလုံးအရမ်းညစ်မဟုတ်သောမိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုရည်ညွှန်းသည်အဖြောင့်ကိုတက်£ 20 ဆုကြေးငွေ!
mFortune – အခမဲ့ Play စကစားတဲ့ ၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှာ
mFortune မိုဘိုင်းကာစီနို West Midlands မှာလည်းထဲက operating မြင့်မားဆုံးကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားကလပ်ဖြစ်ပါသည်. Non-ရပ်တန့်ကစားတဲ့ action ကိုမွငျလြှငျများ၏စိတ်လှုပ်ရှားခံစားနေတဲ့အုတ်နှင့်အင်္ဂတေလောင်းကစားရုံသို့လမ်းလျှောက်ဖို့အသုံးပြုကြသူ punters မ​​ျားအတွက်, mFortune တူညီစိတ်လှုပ်ရှားကမ်းလှမ်း. ဤသည်ကြီးမားသောလစာ-တနေရာရှိကြောင်းမိုဘိုင်းလောင်းကစားရုံဖြစ်ပါသည်, ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းပရိုမိုးရှင်းအားဖြင့်ပိုကြီးပေါက်ဂိမ်းလှုပ်ရှားမှုတို့နှင့်ကြီးသောမိုဘိုင်းကစားတဲ့လစာ: slot ကစားရန်သိုက်, mFortune Hi-Lo Poker, သို့မဟုတ်ကစားတဲ့ရုံ£3မှ, သင်သည်အခြားအားငါပေးမည် FaceBook နှင့် mFortune ပေါ်မှာမျှဝေ ‘Share ကိုအပိုဆု‘ အလကား! မျှဝေခြင်းလုံးဝဂရုစိုက်သည်…
When you make an initial deposit of £100 at mFortune, သူတို့ချက်ချင်းအခြား£ 100 ခန့်နှင့်အတူသငျသညျဂုဏျတငျပါလိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားစယူလျှင် စစ်မှန်သောပိုက်ဆံကစားတဲ့ကစားနည်း cost just 10p, အိမ်မှာနေတဲ့အစိုင်အခဲအနိုင်ရယူပြီးသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတော်တော်လေးကောင်းသောရှာကြသည်.
အရည်ရွှမ်းသော £ 10 အခမဲ့ Pocket Fruity ဆုငှေ
အဘယ်သူသည်ဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောင်းသောပျော်စရာထံအပ်နှံ site တစ်ခုဒါလေးလေးနက်နက်ဆုကြေးငွေယူမယ်လို့စဉ်းစားကြပြီ? သငျသညျစာသားသင်၏လက်ကို၏စွန်ပလွံသို့ fit နိုငျသောပြည့်စုံသောလောင်းကစားရုံရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, then you need to take advantage of mobile Roulette deposit by phone bill offered by world renown Pocket Fruity. မသာသူတို့ရဲ့ကြိုဆိုဆုကြေးငွေများမှာ – £ 10 ဆိုင်းအပ်အပေါ်အခမဲ့ + 400% သိုက်ပွဲ -သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကိုအကောင်းဆုံးအချို့ကို, ဒါပေမယ့်ဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်ရေးသင်တို့အဘို့အစဉ်အဆက်ဆန္ဒရှိမယ်လို့အရာအားလုံးများမှာ.
အိတ်ကပ် Fruity စာသားသင်၌နေအစဉ်အဆက်အဘယျသို့စိတ်ဓါတ်များနှင့်ကိုက်ညီမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဂိမ်းများ. 1950 ရဲ့ရုပ်ပြစာအုပ်သူရဲကောင်းကနေ, ဒစ္စကို Theme slot မှ, Blackjack တူအပေါင်းတို့နှင့်အတူဂန္ကာစီနိုဂိမ်း, Poker, သင်တစ်ဦးအမြန်ကစားတဲ့ SMS ကိုအကြွေးပြင်ဆင်ချက်အတွက်လုပ်ကြနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာများနှင့်သင်တန်း၏ဂိမ်းများကို.
မိုဘိုင်းဂိမ်းများ...moovelous ProMOOtions…UDDERLY Fantastic ပျော်စရာ
လိမ္မာပါးနပ်သော puns ဘေးဖယ်, မိုဘိုင်းဂိမ်းများ တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်အဆင့်အထိဂိမ်းကြာတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းကလပ်ဖြစ်ပါသည်. ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်း option ကိုအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ကစားတဲ့သိုက်ကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်, အပိုဆုကြေးငွေဝပြောသောနှင့်အဆက်မပြတ်လတ်ဆတ်တဲ့အရသာပူဇော်ဖို့ updated, သူတို့ကလည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုအများဆုံးထူးခြားပုံစံလောင်းကစားရုံဂိမ်းအချို့ကိုရရှိနိုင်ဆက်ကပ်.
£5အခမဲ့အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေကွိုဆိုအပိုဆု
100 နေ့ရက်များ – 300 ဆုရရှိသူမြှင့်တင်ရေး: £5သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုငွေသွင်းတဲ့သူကစားသမားများ – ပင် slot ကနေတစ်ဆင့်, ဖုန်းကိုအကြွေးဝယ်အားဖြင့် Blackjack သို့မဟုတ်ကစားတဲ့သိုက် – နေ့စဉ်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ထိုသို့သော HD TV သို့ဒါမှမဟုတ် Android Tablet ကိုအဖြစ်စိတ်ကူးဆုအနိုင်ရမှဆွဲယူ
အားလုံး Top-Up ကိုအပိုဆုကြေးငွေတစ်ဦးကစားသမားခြုံငုံဆုကြေးငွေချိန်ခွင်လျှာမှဆက်ပြောသည်နှင့် – အာမခံလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်တခါ – ငွေသားသို့လှည့်နိုင်ပါတယ်
ကစားသူတစ်ဦး၏ပထမဦးဆုံးပေါ်ငွေသားပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေအတွက်£ 225 အထိ3သိုက်
သငျသညျသေး HD မှာကစားတဲ့ကစားတွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အလမ်းသို့မဟုတ်အခြား slot ဂိမ်းခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်ထွက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြရတယ်. မိုဘိုင်းဖုန်းများ, နဲ့ iPhone သို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဂိမ်းနိူးအတွက် Android စမတ်ဖုန်းအပြည့်အဝဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီအရာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်. ဤနေရာတွင် MobileCasinoFreeBonus မှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့သိုက်အဘို့အကြမ်းအားဖြင့်£5တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာသိုက်အောင်နှစ်ဦးစလုံးထက်သာလွန်ဂိမ်းအတှေ့အကွုံကောင်းစွာရကျိုးနပ်ကြောင်းပြုပြီး, နှင့်စစ်မှန်သောပိုက်ဆံဂိမ်းကစားရာမှအကြိုးရအနိုင်ရ.
ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအတော်လေးသင့်ရဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနှင့်အတူတောင်မှအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံသို့မဟုတ်ကစားတဲ့အဘို့အလောင်းကစားအတွက်ပေးဆောင်, သင်ဆဲလည်းအခမဲ့ကြိုဆိုဆုကြေးငွေဘို့မှတ်ပုံတင်ပြီးကြောင်းလမ်းအတွက်ကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားရနိုင်. တကယ်ပဲနှစ်ခုကြား၌တစ်နေရာရာမှာနေသောလောင်းကစားသမားတွေပိုင်းခြားယခုပင်ကဲ့သို့သောကို select လုပ်ပါကာစီနိုလောင်းကစားရုံမှမိမိတို့ BT landline ငွေတောင်းခံလွှာကို အသုံးပြု. ရုံ£ 1.50 ကနေငွေသွင်းနိုင် Winneroo အားကစားပြိုင်ပွဲ သို့မဟုတ်ဗြိတိန်ရဲ့လူသိများ LadyLucks မိုဘိုင်းကာစီနို.
ဖုန်းဘီလ် Pros နှင့် Cons အားဖြင့်ကာစီနိုဂိမ်းများ Pay ကို
အများဆုံးလိုလားသူများနှင့် Cons နှင့်ဝသကဲ့သို့, အမြင်သော့ချက်: MobileCasinoFreeBonus တာဝန်ရှိလောင်းကစားဝိုင်းလိုအပ်နေပြီဟုတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ, ဒါကြောင့်အများဆုံးမိုဘိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိသည်သော£ 30 ကိုနေ့စဉ်သိုက်ကန့်သတ်ထားတဲ့အားသာချက်အဖြစ်ရှုမြင်သည်. ဒါဟာကျိုးကြောင်းဆီလျော်န့်အသတ်အတွင်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့လောင်းကစားသမားတွေအားပေးစောင့်ရှောက်, နှင့်ကစားသမားသိမ်းသွားရဘယ်မှာအခြေအနေများရှောင်ရှားကူညီပေးသည်. အားလုံးသိုက်ဆုကြေးငွေများနှင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း Top-up ဆုကြေးငွေစဉ်းစား, ဖုန်းကိုဥပဒေကြမ်းအားဖြင့်ကစားတဲ့သိုက်များ၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုပျော်မွေ့သောသူကစားသမားတွေမရှိပြဿနာများကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုခံစားရှိသင့် – နှင့်ဤကန့်သတ်အတွင်းတသမတ်တည်းအနိုင်ရ.
ဝေဖန်ကောင်းချီးပြဇာတ်ရေးဆရာနှင့်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Plautus, ကျယ်ပြန့်အထားသောစာပိုဒ်တိုများစတင်သုံးစွဲဘဲလျက်အဘို့အသိအမှတ်ပြုသည်, '' သင်ကငွေရှာဖို့ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ရရှိပါသည်’ အကြမ်းဖျင်းအတွက် 210 ဘီစီ. ထိုမျှလောက်အထောင်စုနှစ်ကျော်ပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ်နေတုန်း, ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနဲ့စျေးကွက်အတွက်တိုးမြှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတာကအများကြီးဖြုန်းဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုလိုသည်!